Anyị nwalere isi okwu ike BT9, ekweisi ọhụrụ na ike na Energy Sistem | Gam akporosis
Googled | | Ngwa gam akporo, Nyocha
Izu ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere mwepụta nke Igweisi ekweisi BT9, ekweisi ọhụrụ si Usoro Ike. Taa, anyị na-ekwu maka ha ọzọ maka na anyị enweela ohere ịnwale ha ma anyị chọrọ ịgwa gị gbasara ahụmịhe anyị. Companylọ ọrụ Spanish ọ dị mma ikwu na ha ga-enwe mmetụta nke ịge egwu na 3D? Anyị na-elele ya:
1 Unboxing nke Energy ekweisi BT9
2 Njirimara nke Isi Igweisi BT9
Unboxing nke Energy ekweisi BT9
Dị na mbụ na ngwaahịa niile Usoro Ike, ozugbo anyị mepere igbe anyị ga-ahụ nke ọma. Na Igweisi ekweisi BT9 a na-echebe ha nke ọma. Na nke mbu anyi ga achota nnukwute igbe di n’ime ya nke anyi ga ahu n’ime ihe di mfe n’ime akara ulo oru ya na obere igbe nwere ngwa nke ekweisi.
Mgbe anyị mepere ikpe anyị ga-ahụ Igweisi ekweisi BT9 apịaji n'ime obere igbe anyị nwere ntuziaka na akwụkwọ mmado na-abịakwasị ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ ahụ, eriri igwe ọdịyo 3,5mm, eriri USB, carabiner ka anyị wee kwụba ekweisi anyị n'ebe ọ bụla yana broshuọ nwere ozi na ngwaahịa ndị ọzọ Usoro Ike.
Njirimara nke Isi Igweisi BT9
Anyị na-emeghachi ihe anyị gwara gị mgbe anyị nyochara ya Ikuku Ikuku BT8 Noise Canceling: mgbe ị na-azụ ekweisi anyị ga-enyocha na ọ dị mma yana enwere ike ịnụ ha nke ọma. Na Igweisi ekweisi BT9 ha kariri iru ihe mgbaru ọsọ ndi a.
Da nke ha na-ewe dị ezigbo mma. N'ihi ndị ọkà okwu 8 ya na teknụzụ multidriver na ụdị 5 ahaziri iche, anyị nwere ike ị listena ntị n'ụdị ụdị egwu ọ bụla, naanị anyị ga-ahọrọ nke kachasị dabara nke ọma. N'otu ụzọ ahụ, anyị ga-enwe ike ịlele ihe nkiri n'abalị na-enweghị nsogbu ndị agbata obi anyị, na-enweghị ida ụda dị mma n'ihi itinye ekweisi. Igweisi ekweisi BT9 ha na-enye ihe ha kwere nkwa, anyị ga-enwe mmetụta nke ịnọ na sinima, ụda ahụ dị egwu.
Anyị nwere ike ịnụrụ egwu site na kaadi microSD na site na Bluetooth. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ige ntị na ya site na microSD, anyị ga-pịa bọtịnụ on na gbanyụọ nke gosipụtara n'otu akụkụ ahụ, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikọ na Bluetooth na ngwaọrụ ọzọ Igweisi ekweisi BT9 Ha nwere bọtịnụ "anwansi" nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ a mfe. Iji mekọrịta ekweisi anyị ga-pịa bọtịnụ oku maka sekọnd ole na ole, rue mgbe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara na-agbanye. Ozugbo emere nke a, anyị ga-aga na mkpanaka anyị, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba iji jikọọ ha. Anyị ga-ahọrọ ekweisi na menu ma ọ bụ ya. Anyị ga-amata na ha nwere njikọ chiri anya n'ihi na ọkụ ga-akwụsị ịmị ọkụ.
O gbagwojuru gị anya? Ekweisi Usoro Ike ha na-ekwe ka mmekọrịta Nkwurịta Okwu Ubi (NFC). Naanị ị ga-eme ka ngwaọrụ gị dị nso na akara ngosi NFC nke ekweisi maka sekọnd ole na ole iji jikọọ ngwaọrụ abụọ ahụ n'enweghị nsogbu.
na Igweisi ekweisi BT9 ha na-enyekwa anyị ohere ịza oku. Iji mee nke a, anyị ga - emekọrịta ekweisi na ama anyị ma pịa bọtịnụ oku iji zaa. N'akụkụ nke ọzọ nke ahịrị ahụ, ha ga-anụ olu anyị n'ụzọ zuru oke maka mkpọtụ ịkagbu igwe okwu Igweisi ekweisi BT9 A na-etinye ha n'ime otu ekweisi. Mgbe ichoro icho, pịa otu bọtịnụ na voila, egwu a ga - ebido ebe ị kwụsịrị.
na Igweisi ekweisi BT9 ha nwere ntụsara ahụ nke ọma na mpempe akwụkwọ ndị ha na-ebu ma n'akụkụ ma n'elu; Ha dị mfe iji, dị fechaa (naanị ha dị 282 gram), ha na-ada ụda nke ukwuu. Na mgbakwunye, ha nwere batrị 650 mAh nke ga-enye anyị ohere ige egwu maka ihe ruru awa 16 n'usoro. Maka ihe a niile anyị na-atụle nke ahụ Usoro Ike emeela ụfọdụ ezigbo ekweisi. Ọ bụrụ n ’ị masịrị ha dị ka anyị na-eme, ị nwere ike ịchọta ha n’ụlọ ahịa ntanetị nke ụlọ ọrụ naanị € 109.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Anyị nwalere isi okwu ike BT9, ekweisi ọhụrụ na ike na Energy Sistem